हुन्डाईद्वारा ट्राफिक निगरानी उपकरण हस्तान्तरण - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
हुन्डाईद्वारा ट्राफिक निगरानी उपकरण हस्तान्तरण
काठमाडौ । हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि द्वारा कर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई २५ थान क्यामरा हस्तान्तरण गरेको छ ।
हुन्डार्ई मोटर्सले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व अभियान ६ वटा विषय ड्रिम मुुभ, नेक्स्ट मुुभ, इजी मुुभ, ग्रिन मुुभ, सेफ मुुभ र ह्याप्पी मुुभमा गर्दै आएको छ । यी हरेक कदमहरुले समाजमा गर्दै आएको योगदानमा कम्पनीको दृष्टिकोण झल्किरहेकोे छ ।
ट्राफिक सुरक्षा अभियान अन्तराष्ट्रिय हुन्डाई कर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्वको मुख्य आधार रहिआएकोे छ । सेफ मुुभ अन्तर्गत हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि का अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले २५ थान ड्यान क्याम कास्कीका जिल्ला प्रहरी नायब महानिरिक्षक डिआईजी कमल सिंंंह बम लाई हस्तान्तरण गरे ।
सो डिसबोर्ड क्यामराले गाडीको विन्डस्क्रीनबाट निरन्तर भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ । सो क्यामरा विण्डस्क्रीनको भित्री भाग वा डिसबोर्डको माथिलो भागमा जडान गर्न सकिने छ । यसले दुर्घटनाको प्रमाण दिनुका साथै ट्राफिक नियम उल्लंघन र बीमा ठगीहरु पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुराउने छ । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनको पनि अध्ययन गर्न सघाउने छ ।
यसको विशेषता भनेको यसले २४ फिक्सलको भिडियो १२८० x ७२० pixel रेकडिङ्ग गर्दछ । साउन्ड रेकडिङ्ग र ६४ जीबीको मेमोरी कार्ड सपोर्ट गर्नुको साथै यसले २४ घण्टा निरन्तर भिडियो रेकर्ड गर्दछ । साथै यसमा रहेको जीपीएसले गाडीको गति देखाँउदछ । यसमा वाइड एङगल लेन्स छ भने यसले १३२ डिग्रको दृश्य वाइन्डस्क्रीनबाट देखाँउदछ ।
तीन महिनाका लागि बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकार, कर्णाली र ३ नम्बर प्रदेशको बजेट सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरु बजेट बनाउन केन्द्रित भए...
सुन तस्करीको लहरो : पहरो गर्जने संकेत
काठमाडौं । संगठित रूपमा सुन तस्करीका घटनामा एकपछि...
काठमाडौँ । जैविक वस्तुको बारेमा आधुनिक सूचना र सञ्...
काठमाडौँ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम ...